Yekutanga Beta yeFirefox 51 yabuda | Linux Vakapindwa muropa
Zvisinei nekuti maawa makumi mana nemasere chete apfuura kubva zvabuda Firefox 50, timu yeMozilla kuvandudzwa kweshanduro 51 yatotanga, kutora kumberi iyo yekutanga Beta vhezheni yacho.
Pakati pezvirongwa zvakafungidzirwa bhurawuza iri, chirongwa chedu chikuru ndechekuvandudza mashandiro, zvakare kushandisa mashoma zviwanikwa.
Izvi vachazadzisa nekushandisa iyo WebGL 2 3D system, una API inovandudza zvakanyanya kuona, kunyanya mumishini ine mapikicha akabatanidzwa (Intel HD Graphics semuenzaniso). Muchiitiko cheLinux, iyo yakavhurwa sosi Skia 2D mifananidzo ichaitwawo, magiraidhi anovandudza ruzivo rwekubhurawuza kune vashandisi veLinux.
Uyewo odhiyo codecs ichavandudzwa, kusanganisira rutsigiro neFLAC codecs uye mukana wekuchengetedza password mune ese marudzi emafomu akaverengerwa zvakare.
Uyewo Mutauro wechiBelarusian unobviswa paFirefox 51 nekuda kwezvikonzero zvisingazivikanwe, chimwe chinhu icho isu vedu vanotaura chiSpanish zviri pachena hachikanganise zvakanyanya kutaura.
Pasina mubvunzo iyi vhezheni yeFirefox inotaridzika zvirinani kupfuura vhezheni 50, iyo yanga iri vhezheni yakave nekuchinja kushoma, zvishoma pane zvaitarisirwa.
Ehe, iri Beta vhezheni, ndiko kuti, izvo pachine nzira refu yekufamba kusvika vhezheni yekupedzisira, ayo chaiwo misi isati yazivikanwa. Iyo Beta vhezheni ichiri chikamu chekutanga kwazvo chekuvandudza software, saka panogona kunge paine shanduko zhinji dzinogona kuchinja zvachose kune yekupedzisira vhezheni.
Ehezve, isu tine sarudzo yekuyedza vhezheni 51 yeFirefox nekudzvanya kubatana uku uye kurodha pasi iyi browser. Izvi zvinotibvumidza kutarisa shanduko dzako uye fiddle nazvo zvishoma. Nekudaro, kuiswa kwayo munzvimbo dzekuvandudza hakukurudzirwe, nekuti iri vhezheni isina kugadzikana sezvo iri iyo Beta vhezheni uye inogona kuve nezvikanganiso zvekuchengetedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Yekutanga Beta yeFirefox 51 yabuda
Zvingave zvirinani kupfuura mazuva maviri mushure mekuvandudzwa mumawindows muUbuntu mate 16.04 LTS, ichiri chisiri mumabhuku